Ku safridda diyaaradda carruurta - Talooyinka kuugu habboon | Safarka Absolut
Ku raacaya diyaarad caruur
Ku raacaya diyaarad caruur Had iyo jeer maahan hawl aad u fudud in la fuliyo. Tan iyo, sidaan ognahay, iyagu had iyo jeer maareeyaan inay safarka ugu qaadaan si deggan. Wax waalidiinta ka dhigi kara kuwo aan raaxo lahayn laakiin sidoo kale dhammaan socotada ku hareeraysan.
Taasi waa sababta maanta aan kuugu dhaafi doonno taxane ah tilmaamaha safarka diyaaradda carruurta leh. Faahfaahin aasaasi ah oo naga caawin kara wax ka badan inta aan ka fikirno. Waa hab lagu awoodo in wax walba si wanaagsan loo abaabulo loona muujiyo, si marka waqtigu yimaado, aynaan wax u ilaawin.
1 Ku safrida diyaarad carruurta leh illaa laba sano
2 Dukumiintiyada marka aad la safreyso carruurta yar yar
3 Maxaan sameeyaa haddii aan la safrayo laba ilmood?
4 Waxa lagu sameeyo gaariga gaariga lagu riixo
5 Cunto cunugga
6 Ciyaaraha lagu raaco diyaarad caruur wata
7 U diyaari safarka
8 Raaxo wax walba ka sarreeya
Ku safrida diyaarad carruurta leh illaa laba sano
Runtu waxay tahay haddii wiilka ama gabadha ay ka yaryihiin laba sano, markaa fadhiisan maayo kursi. Marka tan ugu caansan waa in la siiyo suun laga xirayo kursiga aabaha ama hooyada. Sidaas darteed sidan waxaad had iyo jeer ugu qaadan kartaa meel u dhow. Markay tahay ilmaha, waa inaad marwalba ka feejignaataa naas nuujinta maaddaama tilmaantan ay ka hortageyso raaxo la'aanta ay cadaadiska isbeddelayaan ee dhegaha ay sababi karaan, si ay iyaduna u dejiso midka yar. Haddii ay da 'weyn yihiin, markaa waxaad had iyo jeer siin kartaa daaweyn.
Dukumiintiyada marka aad la safreyso carruurta yar yar
Runtu waxay tahay in duulimaadyada gudaha aysan ahayn shuruud Waa muhiim inaad haysato aqoonsigaaga ama baasaboor, laakiin runtu waxay tahay inay na caawinayso oo naga ilaalinayso inaan dalbanno noocyo kale oo oggolaansho ah. Taasi waa sababta ay carruurtu had iyo jeer u leeyihiin kaar ama, haddii ay yihiin duulimaadyo qaran, way kuu fiicnaan doontaa haddii aad sidato Buugga Qoyska. Duulimaadyada caalamiga ah waxaa lagugula talinayaa inaad ku qaadatid dhammaan waraaqaha siday u kala horreeyaan, aqoonsi iyo baasaboorba.
Maxaan sameeyaa haddii aan la safrayo laba ilmood?
Waxay noqon kartaa kiiska inaad haysato laba carruur ah, oo aan ku kala duwanaan yarayn da'da. Xaaladdan oo kale, waxaa lagugula talinayaa kan ugu yar, inuu ku fadhiisto adiga iyo kursi la ansixiyay, maadaama ay ka mid tahay shuruudaha amniga ee diyaaradaha. Sidan oo kale, wuxuu bixin doonaa oo kaliya qiimaha ilmaha, halka midka kalena uu ku fadhiisan doono kursi diyaaradda ah wuxuuna bixin doonaa qiimo ka duwan, kaas oo ah wiilasha ama gabdhaha u dhexeeya 2 iyo 11 sano.
Waxa lagu sameeyo gaariga gaariga lagu riixo
Runtu waxay tahay in kiiskan aan sidoo kale haysanno ikhtiyaar ah ku hubi gaariga saxda ah markii aan ka nimid garoonka diyaaradaha. Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu raaxada badan tan iyo markii aan iska indhatirno. Laakiin waa inaan marwalba la jirnaa ilmaha gacanta ku jira. Dhinaca kale, waad la qaadan kartaa ilaa aad ka fuulaysid waxaadna fursad u heysataa inaad ku qaadato qolka haddii boosku ku filan yahay. Haddii kale, waxay geynayaan qolka maqsinnada. Laakiin way kuu soo gudbin doonaan adiga markay diyaaraddu timaaddo meeshii ay ku socotay.
Shaki la'aan, wax aynaan ilaabi karin ayaa ah inaan qaar qaadno cuntada duulimaadka. Maadaama safarka diyaarad lala raacayo carruurta ay tahay wax ay tahay inaan si faahfaahsan u barano. Madadaalada waa mid ka mid ah talaabooyinka la qaadayo iyo waxa ka wanaagsan in lagu sameeyo qaar ka mid ah cuntada aad jeceshahay. Intaas waxaa sii dheer, waxaad u soo qaadan doontaa dhalada uu jecel yahay ee ay ka buuxaan biyo si uu isagu isku maaweeliyo xitaa haddii uusan harraad badan lahayn. Waxaad ubaahantahay inaad sifiican uhesho.
Ciyaaraha lagu raaco diyaarad caruur wata
Shaki la'aan, waa inaan sidoo kale ka fikirnaa iyaga iyo maaweeladooda. Hadday tahay duulimaad gaaban, xaqiiqdii si dhakhso leh ayey u gudbi doontaa laakiin haddii ay dheer tahay, markaa waa inaad sameysaa wax kasta oo suuragal ah si aadan caajisin. Taasi waa sababta ay tahay inay ciyaaruhu goobjoog u ahaadaan. Intaa waxaa dheer in aan awoodi karno rinjiyeynta iyo midabeynta, waxaan had iyo jeer dooran karnaa cayaaraha shakhsiyadda oo kan yar ka dhigi karnaa duuliyaha una oggolaan karnaa inuu diyaaradda ka qaado kursigiisa. Xusuusnow inaadan qaadan alaabo badan oo carruurtu ku ciyaarto si aanad u dhibin rakaabka kale. Maalmahan, waxaan sidoo kale haysannaa ikhtiyaar aan ku raaxeysan karno shaashadaha ay ku jiraan Filimada Carruurta Iyaguna waa kala-dambeynta maalinta.
U diyaari safarka
Haddii ay aad u yar yihiin, ma aha wax u qalma laakiin haddii kale, waxaad marwalba u diyaarin kartaa dhowr maalmood ka hor. Habka ugu fiican ee loola hadlo waa iyada oo loo marayo ciyaaro. Waxaad ka raadin kartaa diyaaradaha, daruuraha iyo wax kasta oo la xiriira safarka aad qaadi doontid. Waa waddo si aad u lumiso cabsida cusub oo go'aansado inaad nasato. Laga yaabee inaysan la shaqeyneynin carruurta oo dhan, maxaa yeelay markii waqtigu yimaado way naga yaabi karaan.
Raaxo wax walba ka sarreeya
Si safarku aad uga fiicnaado, waa inay noqdaan kuwo raaxo leh. Markaa aan ka bilowno dharka, aan siinno sheekadooda ay ugu jecel yihiin ama aan u oggolaanno inay dhagaystaan ​​muusikadaas oo ka dhigaysa mid dhoola caddeeya Mid kale oo ka mid ah tabaha ugu fiican ayaa ah inaan karno dooro waqtiga duulimaadka, xilliyada ay badanaa seexdaan. Marka waa hubaal, safarku wuxuu ka badnaan doonaa kaamil ahaanta iyo dhaqsaha badan haddii aan waxaas oo dhan dhaqan gelinno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Ku raacaya diyaarad caruur
Kaniisadaha ugu quruxda badan Spain